Bariis maraq leh khudaarta dayrta iyo boqoshaada | Bezzia
Maria vazquez | 10/10/2021 10:00 | baastada
Guryo badan bariiska waxaa lagu diyaariyaa maalmaha fasaxa ah. Markay shaqada joogaan, waxoogaa raashin bariis ah ayaa lagu daraa si ay u dhammaystiraan menu Isniinta ama Talaadada. In kasta oo paella ay tahay boqoradda kiisaskaan, Bezzia waxaan runtii jecel nahay inaan ku raaxaysano a Bariis maraq leh khudaarta dayrta iyo boqoshaada sida tan aan maanta soo jeedinno.
Waxaan jecelahay maraq bariis ah, inkasta oo aysan ahayn maraq sidaa darteed miraha bariisku waxay ku dabaalanayaan maraqa. Sidee u jeceshahay iyaga? Ku ciyaar qadarka maraq si bariisku u noqdo mid aad jeceshahay. Dhowr jeer oo hore waxaa laga yaabaa inaad isku hagaajiso qaddarka duulimaadka; hadhow, waxaad yeelan doontaa qiyaasta la qabtay.
Oo ay weheliso bariiska, boqoshaada iyagu waa halyeeyada cuntadan. Iyada oo ku xidhan kuwa aad isticmaasho, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad xoogaa karsato ka hor intaadan ku darin bariiska. Waxaan ku sameynaa tan noocyada ugu adag, inkasta oo xaqiiqda ah in waqtiga karinta ee bariiska ay ku filan tahay karinta.
Saamaynta 4 ee saliid saytuun ah oo dheeri ah
1 basal cad oo weyn, la shiiday
2 basbaas cagaaran oo Talyaani ah, oo la jarjaray
450 g. boqoshaada dayrta
260 g. bariis
2 qaado oo suugo yaanyo ah
1/2 qaado oo ah paprika macaan
Dhowr ubax oo broccoli ah, ayaa la kariyey
Midabaynta cuntada (ikhtiyaar)
Haddii mid ka mid ah boqoshaada aad isticmaali doontid ay aad u adag tahay, ku kari ilaa dhowr daqiiqadood digsi gooni ah si aad wax yar u jilciso.
Marka la sameeyo, digsi kuleyl afar qaado oo saliid saytuun ah iyo ugaarsada basasha iyo basbaaska inta lagu jiro 10 daqiiqo.
Kadib ku dar boqoshaada iyo toonta oo xinjirta oo shiil ilaa kuwa ugu horreeya ay khafiif yihiin.
Kadib ku dar bariiska oo shiil dhowr daqiiqo ka hor intaadan ku darin marka hore, yaanyada la shiilay iyo tan labaad, xawaashka.
Isla markiiba ka dib maraqa ku shub, midabaynta cuntada iyo broccoli la kariyey ayaa ubaxa. Xaddiga biyuhu waxay ku xirnaan doontaa bariiska, dabka ... laakiin waa inay ahaataa qiyaastii 4 jeer bariiska.
Isku qas, dabool digsiga iyo kari ilaa kulayl aad u sarreeya lix daqiiqo.
Kadib, daboolka ka qaad, saar oo ku kari kuleyl jilicsan laba iyo toban daqiiqo oo kale oo walaaqaya bariiska marba mar. Haddii aad aragto inay qalalan tahay, waa inaad ku dartaa maraq ama biyo.
Marka bariisku jilicsan yahay, ka saar digsiga dabka, ku dabool digsiga maro iyo bariiska leh khudaarta iyo boqoshaada ha istaago dhowr daqiiqo ka hor intaadan u adeegin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Recipes » baastada » Bariis maraq leh khudaarta dayrta iyo boqoshaada
Sidaad indhahaaga u hagaajin lahayd haddii aad leedahay daboollo indhuhu